भारतीय बाँधको पीडामा नेपाली एक हजार हेक्टर जग्गा डुबानमा
कपिलवस्तु, साउन २ गते । सीमा क्षेत्रका भारतीय बाँधका कारण नेपाली भू–भाग बर्सेनि डुबानमा पर्दैआएको छ । यस वर्ष पनि कपिलवस्तुका दक्षिणी भेगको एक हजार हेक्टर जग्गा डुबेको छ ।
भारतीय पक्षले पानी जम्मा गर्न सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधको ढोका वर्षायाममा बन्द गर्ने र सुख्खायाममा खोल्ने गर्दछ ।
डुबानको कारण यशोधरा गाउँपालिका–५ मा पर्ने भगवानपुर, लोहरौली, मुडिला, कचरिहवा साथै सोहि गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित रङ्गपुर र भैसहिया गाउँ, मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित बरकुल, बिजुवा, जमुनी, र हरिवंशापुर गाउँका एक हजारभन्दा बढी हेक्टर धान रोपेको खेत डुबेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका ती गाउँ तथा बस्तीले बर्सेनि डुबानको सास्ती भोग्दैआएका छन् ।
भारतीय पक्षले कपिलवस्तुका सिमानामा निर्माण गरेको बझाहा, महलीसागर, सिसवा र मझौली बाँधका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दैआएको छ । महलीसागरमा भारतले आफ्नो भूमि सिँचाइका लागि उक्त बाँध निर्माण गरेको भए पनि यसवर्ष भारतीय पक्षले बाँधको १७ वटा ढोका बन्द गरी चार फिट अग्लो सपोर्ट लगाएर पानी थुनेको छ ।
यही पानीले सीमापारि लोभलाग्दो ढङ्गबाट सिँचाइ गरी धान रोपाइँ गर्दछन् भने सुख्खायाममा गहँु र तोरी, तरकारी खेती गर्दछन् । भारतले सिद्धार्थनगर जिल्ला अन्तर्गत को सो क्षेत्रमा यहीँ बाँधबाट आफ्नो एक सय २० हेक्टरमा सिँचाइ गर्दैआएको छ तर नेपाल तर्फका खेतमा भने चार फिट सम्म पानी जमेको छ ।
भारतले निर्माण गरेको बाँधकै कारण विगत २५ वर्षदेखि यस्तै समस्या झेल्दै आएको भगवानपुरवासी बताउँछन् । आफ्नो तीन बिघा जग्गामा पानी जमेकै कारण २० वर्षदेखि धान लगाउन नपाएको स्थानीय मङ्गल यादवको भनाइ छ । वर्षमा गहँुसम्म लगाउँछौ तर धान लगाउने बेला सधै खेत डुबेको हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । आफूहरूले बर्सेनि यो समस्या झेल्दैआए पनि समाधान भने हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
अर्का स्थानीय राधेश्याम पाठकले भारतीय बाँधका कारण सीमा क्षेत्रका खेत उनीहरूका लागि पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी बनेको बताउनुभयो । खेती गर्न कहिल्यै पाइँदैन, समस्या समाधान पनि हँुदैन, खेत हेरेर बस्नु बाहेक विकल्प छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
ढिलो वर्षा हुँदा रोपेको धानसमेत वर्षा पछि डुबेर नष्ट हुने गरेको किसानको भनाइ छ । स्थानीय लोहरौला, भगवानपुर, रङ्गपुर गाउँका कृषकले धान रोपिसकेका छन् तर भारतीय पक्षले बनाएको बाँधका कारण अहिले हजार बढी हेक्टर धानखेत डुबिसकेको छ । सीमाक्षेत्रका स्थानीय यस वर्ष पनि धानखेती राम्रो नहुने भन्दै उत्पादनको आश मारेका छन् । पाँच÷छ घण्टा लगातार पानी पर्नासाथ बाँधकै कारण पूरै खेतगाउँ डुब्ने गरेको छ । जे खेती ग¥यो, त्यही डुब्ने गर्छ, पीडित कृषक इन्द्रजित यादवले भन्नुभयो । कुनै वर्ष उब्जनी स्याहार्न पाउँदैनौ, उहाँले भन्नुभयो, पानीले सबै बाली कुहिन्छ ।
भारतीय चार ठूला बाँधका कारण बर्सेनि डुबानको मार खेपिरहेका किसानलाई राज्यले अहिलेसम्म कुनै राहत दिएको छैन । २५ वर्षदेखि डुबानको पीडा सहँदैआएका किसान अहिलेसम्म कुनै सरकारले ध्यान नदिएको र सहयोग नगरेको आरोप लगाउछन् । न समस्या सुन्छन् न भारतसँग यसबारे कुरा गर्छन् भएको क्षति हेर्न पनि आउँदैनन्, राहत पनि दिँदैनन्, स्थानीय धनराज यादवले भन्नुभयो ।
हाम्रो पीडा पनि सुस्ता भन्दा कम छैन, उहाँले थप पीडा पोख्नुभयो । भारतीय पक्षले रातारात १७ वटा फाटकमा सपोर्ट लगाएर बाँधको पानी अवरोध गरेपछि सोमबार कपिलबस्तुका क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बृजेशकुमार गुप्ता र प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
अनुगमन पश्चात सङ्घीय सांसद गुप्ताले भारतीय पक्षले स्थायी रूपमा बाँध बाँधेर नेपाली जनतालाई दुःख दिने कुचेष्टा गरेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड मिचेर भारतले सम्झौता विपरीत गरेको उक्त कार्य नेपाल र नेपालीका लागि निन्दनीय रहेको जिकिर गर्नुभयो । मैले यसबारे तत्काल प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी गराउँछु, दिर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्छु, उहाँले भन्नुभयो ।
बर्सेनि डुबानबाट पीडित किसानका लागि राहतको व्यवस्था मिलाउन समेत सङ्घीय सरकार समक्ष आग्रह गर्ने गुप्ताले बताउनुभयो । कपिलवस्तुका चार विभिन्न स्थानका सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि हुने डुबानको समस्या बढ्दो छ ।
अझ ती बाँधलाई जोडेर सतहदेखि पाँच फिटसम्म अग्लो पक्की सडक निर्माण गर्दा विगतमा डुबान नहुने नेपाली भूमीसमेत डुब्न थालेका छन् । डुबानको समाधान गर्न कुनै पनि सरकारले चासो नदिँदा यस क्षेत्रको कृषि उत्पादन घट्दै गइरहेको छ ।
विवाहित युवा युवतीमा अझै परिवार नियोजन स